Lionel Messi oo rikoor cusub ka sameeyay Tartanka Champions League-ga – Geelle Mag
Lionel Messi oo rikoor cusub ka sameeyay Tartanka Champions League-ga
Xidigga Kooxda Kubadda Cagta ee Barcelona Lionel Messi ayaa rikoor cusub oo Champions League-ga sameeyay xalay kulankiisii 700-aad ee uu u saftay kooxdiisa Barcelona.
Lionel Messi ayaa kulankiisii 700-aad u ciyaaray xalay kooxdiisa Barcelona tartammada oo dhan, waxaana uu dhigay rikoor cusub oo dhanka Champions League-ga, kadib markii uu shabaqa soo taabtay kulankii xalay ay la ciyaareen kooxda Borussia Dortmund.
Dortmund ayaa noqotay kooxdii 34-aad oo uu gool kaga dhaliyo tartankan xiddiga xulka qaranka Argentine, waxaana uu sidaas kaga sare maray xidigaha Raul iyo Cristiano Ronaldo.
Kabtanka Argentine ayaa ku soo bilowday kulankii ay xalay ka horjeedeen naadiga Bundesliga ka ciyaarta, waxaana uu kulankaas ka dhigay rikoor u gaar ah.
Ciyaaryahanka Blaugrana ee Messi ayaa gool dhaliyay kulankii ay xalay guusha kaga gaareen kooxda Borussia Dortmund oo soo booqatay garoonka Camp Nou.
Lionel Messi ayaa ku guuldarreystay inuu gool ka dhaliyo Kooxda Borussia Dortmund kulankii lugta hore ee dhacay bishii September, kadib markii uu ka soo kacay kursiga keydka oo uu bedel ku soo galay, kulankaas ayaana ku dhammaaday barbaro 0-0 ah, laakiin xalay ayuu shabaqooda soo taabtay.
Kooxda Borussia Dortmund ayaana noqotay kooxdii 34-aad ee dhibane u noqota Lionel Messi tartankan kulankii xalay, mana jiro ciyaaryahan 34-kooxood oo kala duwan Champions League-ga gool ka dhaliyay, kaliya Leo ayaa xalay sameeyay arrintaas.
Halyeeyga kubadda cagta ee xulka Cameroon Samuel Eto'o oo Jaamacadda Harvard ku biiray.